AMISOM oo Raali-galin ka bixisay Dilka dad shacab ah oo ay ku toogteen Marka – Radio Daljir
Agoosto 10, 2015 2:48 b 0
Isniin, Ogoosto 10, 2015 (Daljir) — Taliska Hawlgalka AMISOM ayaa soo saaray War Saxaafadeed uu kaga hadlay dhacdadii ay Ciiddanka AMISOM labo toddobaad ka hor dad rayid ah ku dileen magaallo-maadaxda Gobalka Sh/hoose ee Marka.
War Saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ay AMISOM labadii toddobaad ee la soo dhafaay Hawlgallo ka wadeen Gobalka Sh/hoose, isla markaana ay ciiddanka iska difaaceen weerar ay Dagaalamayaasha Alshabaab la beegsadeen Kolonyo sahay u waday Ciiddanka AMISOM.
War Saxaafadeedka ayaa lagu xusay inay AMISOM aad uga xun yihiin haddii ay is-rasaasayntaasi ku geeriyoodeen dad rayid ahaa.
Taliska AMISOM waxay kaloo sheegeen inay si xooggan u qaateen waararka ku aadan inay dad rayid ah ku geeriyoodeen shilkaasi.
War Saxaafadeedka ayaa lagu sheegay inay Saraakiisha AMISOM kulan la qaateen Odayaasha Deegaanka, oo ay ka wada hadleen xoojinta nabadda, iyadoo qaar ka mid ah Odayaasha muujiyeen khatarta ay kala kulmaan Ciiddanka AMISOM ee isticmaala jidka isku xira Markaa iyo Muqdisho.
War Saxaafadeed waxaa lagu so ogebagebeeyey inay AMISOM si dhow ugala shaqeyn doonaan Dowladda Federaloka Somalia iyo Maamul-gobaaleedka K/galbeed sidii loo xalin laahaa xiisadda dhinacaAmmaanka ee magaaalladdaMarka.